Diini: Waan Ognahay Dagaalka Shabaab & ISIS
Wasiirka waxa uu sheegay in khilaafka iyo dagaalka labadan koox uu salka ku hayo afkaaraha guracan ee xagjirnimada.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya, Cabdiqaadir Cali Diini oo waraysi gaar ah siiyay Idaacadda VOA-da ayaa sheegay in dawladiisa ay ka warhayso dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya.
VOA-da ayaa horey u werisay iska hor-imaadyo dhowr ah oo dhex maray xubno doonayey inay ka goostaan Shabaab, kuna biiraan Daacish iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo dhowr maleeshiyo lagu dilay.
Wasiirka waxa uu sheegay in khilaafka iyo dagaalka labadan koox uu salka ku hayo afkaaraha guracan ee xagjirnimada, islamarkaana dawladdiisu aanay marna u ogolaan doonin kooxda Daacish iyo agagixisada in ay fikradahooda ka dhaqan galiyaan dalka Soomaaliya.
Wariyaha VOA-da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa ugu horrayn waydiiyay waxa ay salka ku hayaan dagaalada ka dhexqarxay Kooxda Al-Shabaab ee ku muransan in loo xuubsiibto Daacish iyo in wali lagu sii jiro Ururka Al-Qaacida.
Wareysi: Wasiirka Gaashaandhigga Somalia
Rabshado Dhimasho Leh Oo Ka Dhacay Ethiopia
Jubba: Tuulo-Barwaaqo Dib Ayaan U Qabsanay
Bujumbura: 7 Qof Oo Lagu Dilay Rabshado
Somalia Oo Codsi Ka Jeedisay Shirka Geneva